ft - Synonyms of ft | Antonyms of ft | Definition of ft | Example of ft | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for ft
Top 30 analogous words or synonyms for ft
မန္တလေး နန်းတော် Surrounding the walls, atadistance of about 18 m (60 ft) from them, isamoat 64 m (210 ft) wide, and of an average depth of 4.5 m (15 ft). In the case of foes armed with ancient weapons, this moat would no doubt have presentedarather formidable obstacle to the besieging army, whose crafts would have been completely exposed to the missiles of the warriors protected by the merlons on the ramparts and on the barbicans.
ဧရိယာ အလျားယူနစ်တိုင်းတွင် ဆိုင်ရာ ဧရိယာ၏ ယူနစ်များရှိကြသည်။ ထိုကြောင့် ဧရိယာကို စတုရန်းမီတာ (m)၊ စတုရန်းစင်တီမီတာ (cm)၊ စတုရန်းမီလီမီတာ (mm)၊ စတုရန်းကီလိုမီတာ (km)၊ စတုရန်းပေ (ft)၊ စတုရန်းကိုက် (yd)၊ စတုရန်းမိုင် (mi) အစရှိသဖြင့်တို့နှင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။ အက္ခရာသင်္ချာနည်းအရ ထိုယူနစ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အလျားယူနစ်များ၏နှစ်ထပ်ကိန်းများအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်သည်။
ဂျွန် စီနာ John Cena သည် အမေရိကန်တွင် နာမည်ကျော်ကြားသော နပန်းသမားကြီး တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏ မွေးနေ့သက္ကရာဇ်မှာ April 23, 1997 ဖြစ်ပြီး West NewBury မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ အရပ်အားဖြင့် 6.1 ft ခြောက်ပေနဲ့ တစ်လက်မ ရှိပြီး သူ၏ နာမည်အပြည့်အစုံမှာ John Fleix Anthony Cena ဖြစ်ပါသည် ခုလက်ရှိ မိန်းမနာမည်မှာ Elizabeth Huberdeau ဖြစ်သည်။
လင်းနို့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လင်းနို့အမျိုးပေါင်း (၁၁၀၀) ကျော်ရှိသည့်အနက် (၂၀%) ခန့်ကိုသာ နို့တိုက်သတ္တဝါအဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သေးသည်။ (၇၀%) သောလင်းနို့မျိုးများမှာ အင်ဆက်စားသတ္တဝါများဖြစ်သည်။ ကျန်လင်းနို့မျိုးများမှာ သစ်သီးစားသတ္တဝါများဖြစ်ကြသည်။ လင်းနို့များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ပျံ့နှံ့စွာ ရှိနေကြပြီး ဝတ်မှုန်ကူးခြင်းနှင့် သစ်စေ့များပျံ့နှံ့ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။ များစွာသော အပူပိုင်းဒေသအပင်များများမှာ သစ်စေ့များ ပျံ့နှံ့မှုအတွက် လင်းနို့များပေါ်တွင် လုံးလုံးလျားလျား တည်မှီနေကြရသည်။ အရွယ်အစားအားဖြင့် အလျား ၂၉–၃၃ မီလီမီတာ (၁.၁၄–၁.၃ လက်မ) ခန့်နှင့် အလေးချိန် ၂ ဂရမ် (၀.၀၇ အောင်စ) ခန့်သာရှိသော Kitti's Hog-nosed Bat လင်းနို့မျိုးများမှသည် တောင်ပံဖြန့်လိုက်လျှင် 1.5 m (4 ft 11 in) နှင့် အလေးချိန် 1.2 kg (3 lb) အထိရှိသော Giant Golden-crowned Flying-fox များအထိ အရွယ်စုံရှိသည်။